Kulamada - Dhimashadii Wax Soo Saarkii Mareykanka | Martech Zone
Kulamada - Dhimashada Waxsoosaarka Mareykanka
Talaado, Maarso 23, 2010 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Maxay kulamadu nuugaan? Talaabooyin noocee ah ayaad qaadi kartaa si aad shirarka uga midho dhaliso? Waxaan isku dayay inaan ka jawaabo dhammaan su'aalahaas soo-jeedintaan ah (haddana runta leh) ee ku saabsan shirarka.
Tani waa aragti la wanaajiyay oo ku saabsan bandhigga aan ku sameeyay shaqsi ahaan. Bandhigan oo ku saabsan Shirarka muddo ayuu imanayay, waan qoray ku saabsan kulamada iyo wax soo saar hore. Waxaan kaqeybgalay tan shirar ah, badankoodna waxay ahaayeen waqti lumis aad u xun.
Markii aan bilaabay ganacsigeyga, waxaan ogaaday inaan ogolaaday waqti badan inaan jaqo jadwalkayga shirarka. Aad ayaan u edbiyaa hadda. Haddii aan haysto shaqo ama mashaariic aan qabto, waxaan bilaabayaa joojinta iyo dib u dhigista shirarka. Haddii aad la tashaneyso shirkado kale, waqtigaagu waa inta aad haysato oo dhan. Kulamadu way ka cuni karaan wakhtigaas si ka dhakhso badan waxqabad kasta oo kale.
Dhaqaalaha ay tahay in wax soo saarku kor u kaco isla markaana kheyraadku hoos u dhaco, waxaad u baahan kartaa inaad si dhow ugu fiirsato shirarka si aad u hesho fursado aad ku horumariso labadaba.
Waxaan ku soo jiray taxane akhris dhawaanahan buugaagtani runti way igu dhiirrigelinayeen ganacsigayga iyo waxsoosaarkayga shaqsiyeed - Seth Godin Linchpin: Adigu Ma Lihi Karaa?, Jason Fried & David Heinemeier Hansson's Shaqada shaqada iyo Tim Ferriss ' Shaqada 4-Saacadaha Shaqada. Buug kasta wuxuu la tacaalayaa Kulamada dhexdooda ah.
Tags: shirarka dhimashadakulanwax soo saarka
Kordhi Boggaga Booqasho kasta oo yaree Qiimaha Kordhinta
Soo bandhigid weyn Douglas, waad ku mahadsantahay wadaagista!
Waxaan baryahan dambe la maqnaa buuga cusub ee Godin oo waxaan ka helay sheeko xiiso leh oo ku saabsan Linchpin oo ka socota Startups.com. Halkan waad ka hubin kartaa http://bit.ly/b219d6
Kulamada qorshaynta kulamada. Dhimashada hay'ad kasta oo shirkadeed waa beddelidda karti-shaqsiyeed iyo karti-wadareedyo leh iibsasho-wadareed iyo isu-tanaasul heerka hoose ee ugu hooseeya. Waan ku raacsanahay waxyaabo badan Doug inuu halkan ka sheego.
Xiisad wanaagsan = xiisad caafimaad leh. Waxaan jeclahay in aan galo shirarka anigoo marhoreba soosaaray wax bilaa iibsasho ah. Ugu yeer “caddeynta fikradda” waxaadna had iyo jeer hubisaa inaad iibsato fulinta. Iskuday: waa mid wax dhisaya, waa mid firfircoon, waxayna caqabad ku tahay dadka inay si kale u fikiraan.